Fananganana marika: ny vinavina 7 dia maniry ny hiankina amin'ny orinasao | Martech Zone
Fananganana marika: ny vinavina 7 dia irinao hiankina amin'ny orinasanao
Asabotsy Jolay 21, 2018 Asabotsy Jolay 21, 2018 Douglas Karr
Tokony ho iray volana lasa izay, dia tokony handray anjara amin'ny fivorian'ny ideolojia marketing ho an'ny mpanjifa iray aho. Nahafinaritra izany, niara-niasa tamin'ny consultancy fantatra amin'ny famolavolana roadmaps ho an'ny orinasa teknolojia avo lenta. Rehefa novolavolaina ireo sori-dalana, dia nahavariana ahy ny lalana tsy manam-paharoa sy miavaka natrehin'ny ekipa. Na izany aza, tapa-kevitra ihany koa aho ny hitazomana ny ekipa hifantoka amin'ny tsena kendrena.
Tetikasa mitsikera amin'ny indostria maro ankehitriny ny fanavaozana, saingy tsy zakan'ny mpanjifa izany. Orinasa tsy mampino miaraka amin'ny vahaolana ingenius dia tsy nahomby nandritra ny taona maro satria tonga tany amin'ny tsena aloha loatra izy ireo, na nanome ny filana mbola tsy nisy. Samy afaka manonona ny famonoana izy roa tonta - ny fangatahana dia lafiny fitsikerana isaky ny vokatra na serivisy mahomby.
Rehefa nandefasana kopian'ny Manangana Storybrand, avy amin'i Donald Miller, tena tsy faly be aho namaky azy io ka nipetraka teo ambonin'ny fitoeram-bokiko io fotoana io. Noheveriko fa ho fanerena hafa ho azy io fitantarana ary ny fomba mety hanovana ny orinasanao… fa tsia. Raha ny marina dia nosokafan'ity boky ity ny hoe "Tsy boky milaza ny tantaran'ny orinasanao ity." Whew!
Tsy te-hamoy ny boky manontolo aho, vakiteny haingana sy fampahalalana izay tena amporisihiko. Na izany aza, misy lisitra fitsikerana iray tiako zaraina - ny fisafidianana a faniriana mifandraika amin'ny fahaveloman'ny marika anao.
Prospect fito dia miankina amin'ny fahaveloman'ny marika anao:
Mitahiry harena ara-bola - Hitahiry ny volan'ny mpanjifanao ve ianao?
Mitahiry fotoana - Moa ve ny vokatrao na serivisinao hanome fotoana bebe kokoa ny mpanjifanao hiasa amin'ny zava-dehibe kokoa?
Fananganana tambajotra sosialy - Moa ve ny vokatrao na ny serivisinao mikolokolo ny fanirian'ny mpanjifanao hifandray?
Mahazo toerana - Mivarotra vokatra na serivisy manampy ny mpanjifanao hahatratra hery, laza ary fanatsarana ve ianao?
Manangona loharanom-bola - Ny fanolorana famokarana, fidiram-bola na fihenan'ny fako mitombo dia manome fahafaha-miroborobo ny orinasa.
Ny faniriana voajanahary ho malala-tanana - Ny olombelona rehetra dia manana faniriana voajanahary hanome malala-tanana.
Ny faniriana hanana dikany - Ny fahafahan'ny mpanjifanao mandray anjara amin'ny zavatra lehibe kokoa noho izy ireo.
Araka ny filazan'ny mpanoratra Donald Miller:
Ny tanjona ho an'ny marika dia ny fahafantaran'ny mpanjifa mety rehetra ny toerana tianay hitondra azy ireo.
Iza amin'ireo faniriana no ampidirinao amin'ny marikao?
Momba ny fananganana storybrand
Ny fizotry ny StoryBrand dia vahaolana voaporofo amin'ireo mpitarika orinasan'ny tolona rehefa miresaka momba ny orinasany. Ity fomba revolisionera ity amin'ny fifandraisana amin'ny mpanjifa dia manome ny mpamaky tombony amin'ny fifaninanana farany, mampiharihary ny tsiambaratelo amin'ny fanampiana ny mpanjifany hahatakatra ny tombony azo avy amin'ny fampiasana ny vokatra, hevitra na serivisiny.
Manangana StoryBrand manao izany ve amin'ny fampianarana ny mpamaky ny tantara fito manerantany manondro ny olona rehetra mandray; ny tena antony mahatonga ny mpanjifa mividy; ny fomba fanamorana ny hafatra amina marika hahafantaran'ny olona azy; ary ny fomba famoronana fandefasana hafatra mahomby indrindra ho an'ny tranokala, brochure ary media sosialy.
Na talen'ny varotra orinasa orinasa mitentina miliara dolara ianao, tompona orinasa kely, mpanao politika nilatsaka hofidina, na mpihira mpitarika ny tarika rock, Manangana StoryBrand hanova mandrakizay ny fomba firesahanao momba ny maha-ianao anao, ny zavatra ataonao, ary ny lanja tokana entinao ho an'ny mpanjifanao.
Fampahafantarana: Affiliate Amazon aho ary mampiasa ny rohy hividianana ny boky amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: marikamarikafananganana andiana tantaratantaran'ny mpanjifafanirianadonald millerFanamafisana ny varotrastorybrand
Lisitry ny fikojakojana fikolokoloana WordPress: ny lisitry ny toro-hevitra, fitaovana ary fomba fanao tsara indrindra
Onomies Lexical: Synonymy, Antonymy, Hyponymy, Meronymy, Holonymy